ကစားကဒ်များ၊ Tarot ကဒ်များ, Oracle ကဒ်များ - ဝမ်ဂျင်း
Tarot ကဒ်များပုံနှိပ်ပြီး ...
Tarot ကတ်ပြားများ၊ ချစ်ခြင်း၊ လူ့အသိုင်းအ ၀ ိုင်းကြားဆက်ဆံရေးနှင့်လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်အကြံဥာဏ်ပေးနိုင်သည်။
Rider Tarot ကဒ်ကုန်းပတ်
Silver Edging Rider Tarot Card Deck WJPCC သည်ကျော်ကြားသော Tarot ကဒ်ပြားများစွာထုတ်လုပ်သည့်အတွက်ဂုဏ်ယူသည်။ အနုပညာရှင်အတော်များများသည် 350g ကိုရွေးချယ်ကြသည်။
ဂိမ်းကတ်ပြားများရုံးခန်း၊ အထွက်၊ ကားစီးခြင်းနှင့်ပျော်ပွဲစားများအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။ ကဒ်ဂိမ်းအစုံနှင့်အများစုအတွက်သတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားမရှိပါ။
Playing Cards များကိုကြော်ငြာခြင်း
ကြော်ငြာခြင်းကို Poker ကိုလူသိများသော Poker, Gift Poker, Promoter Poker ဟူ၍လည်း ခေါ်သည်။ ထောင့်နံပါတ်တွေ၊
စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း Cardistry ...
ကဒ်ကုန်းပတ်ကစားရန်စိတ်ကူးကတ်ထူပြားများပြုလုပ်နည်း။ WJPCC ကအများကြီးသိတယ်။ အရည်အသွေးမြင့်ကတ်ထူပြားကိုသာကစားသည်။
လက်လီရောင်းချခြင်း (သို့) အခြားစီမံကိန်းများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြင့်သင်၏ကဒ်ပြားကိုဖြည့်ပါ။ အဲဒါ ...
ကုန်ပစ္စည်း template ကိုခွဲခြား
ကဒ်ပြားများ၏ Mirage ကုန်းပတ်
သော့ချက်စာလုံးများ - WJPC, WJPCC, ကဒ်ပြားများ၊ ကတ်စတီဒီယိုး၊ ကတ်စကိတ်၊ ကတ်စတီဒီယစ်ကဒ်၊ မှော်ကစားကဒ်၊ WJPC မှပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်ကုန်းပတ် Mirage Deck of Kickstarter ၌အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့သည်။ WJPC သည်ရွေးချယ်မှုအတွက်ထောက်ပံ့သူဖြစ်လာသည်။
ဖြေ။ ။ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ နမူနာ ၃ ခုရှိတယ်။ 1. ကျွန်ုပ်တို့၏ကဒ်ကုန်းပတ်နမူနာများကိုအခမဲ့ရရှိနိုင်သည်။ သင်ပို့ဆောင်ခကိုသာပေးရသည်။ ၂။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်နမူနာများ - သင်၏အနုပညာလက်ရာမဖြတ်သေးသောစာရွက်များ၊ ကဒ်မျက်နှာ၊ ကျောနှင့်အိတ်အကွက်များအပါအ ၀ င်၊ ဒီဂျစ်တယ်နမူနာအရောင်များကို ၇၀% မှ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းထိ offset ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်လိုက်ဖက်သည်။ 3. တရားဝင်နမူနာ (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနမူနာ) ။ ထုတ်ကုန်နှင့်အတူတူပင်နမူနာအရောင်သည်ထုတ်ကုန်အရောင်နှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည် 90-95% ခန့်
သငျသညျနိုင်ငံတကာ / တင်ပို့သလား
ဟုတ်ကဲ့! ကျနော်တို့ကမ္ဘာတဝှမ်းနီးပါးနေရာတိုင်းတင်ပို့။ ကျွန်ုပ်တို့မှ DHL၊ FedEx၊ UPS၊ လေကြောင်းနှင့်သမုဒ္ဒရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများကိုကမ်းလှမ်းသည်။ သင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုစစ်ဆေးနိုင်ရန်သင့်ပို့ကုန်လိပ်စာကိုအသိပေးပါ။
မင်းရဲ့ MOQ ကဘာလဲ။ မင်းရဲ့ MOQ အောက်မှာကဒ်တွေလုပ်လို့ရမလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏ MOQ သည်မူကွဲတစ်ခုအတွက် 500 decks ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုသည့်အတိုင်းကဒ်ပြား ၅၀၀ အောက်အောက်တွင်ကဒ်များပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်မှာ 500 ကုန်းပတ်များနှင့်တူညီသည်။ ၎င်းသည်ကုန်းပတ်တစ်ခုစီကိုအလွန်စျေးကြီးစေသည်၊